शेयर बजारमा हरियाली, काराेबार रकम पनि बढ्याेMain Samachar
शेयर बजारमा हरियाली, काराेबार रकम पनि बढ्याे
४ कार्तिक २०७७, मंगलवार १९:५६ प्रकाशित
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड । तस्बिर: मेन समाचार
काठमाडाैं । धितोपत्र बजारमा आज शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्सेमा १३.२२ बिन्दुले बढेर एक हजार ५८३.६० मा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक २.६५ बिन्दुले वृद्धि भई ३१३.५५ मा पुगेको छ ।
आज कूल १९३ कम्पनीका ५० लाख २४ हजार ५० कित्ता शेयर रु एक अर्ब २७ करोड १८ लाख २९ हजार ९९० मूल्यमा खरिद बिक्री भए । कारोबार भएका आज १२ वटै उपसमूहको शेयर बिक्री भएको छ ।
बैंकिङ ७.७४, व्यापार २.९६, होटल १९.२७, विकास बैंक २२.१९, जलविद्युुत् २७.७२, वित्त ८.६, निर्जीबन बीमा ५५.७६, उत्पादन २५.३६, अन्य ११.४, लघुवित्त १६.४४, जीवन बीमा ७८.१२ र सामूहिक लगानी कोष ०.११ बिन्दुले उकालो लागेको छ ।
बालुवाटारमा ओली र गौतमको अर्थपूर्ण डिनर मिटिङ
नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि, बजार पूँजीकरण ३६ खर्ब ६६ अर्ब ६९ करोड
काेराेनाकाे जाेखिम बढ्दै गर्दा छैन निगरानी, छैन सावधानी !
बैंक वित्तीय संस्थाको सेवामा गुनासो छ ? यसरी गर्नुस् उजुरी
राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन जेठ ६ गते, मताधिकार क–कसलाई ?
दुइ थान भरुवा बन्दुकसहित पक्राउ
कटकुवा स्वास्थ्य चौकीलाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय